Sodium Formate, Melamine Protein, Fivondran-kena masinina - Pulisi
Lasa mpinamana tsara izahay amin'ny SINOPCE / CNPC / Saint-Gobain / BHP.
Pulisi dia mpamatsy manerantany amin'ny fitsaboana simika manokana, aorinay amin'ny 2006, satria mpamatsy sôkôla lehibe china lehibe indrindra, 4000MT / volana ny fahaizana,
manana zavamaniry roa isika nandalo ny fanamarinana ISO14001 / ISO 9001 / REACH / FAMI-QS / GMP
mifantoka amin'ny R&D, famokarana, varotra sy lozika, qingdao / tianjin / shanghai sy ny Zibo Free Trade Zone dia manana trano fitehirizam-bokonay, serivisy ho an'ny indostrian'ny fandefasana menaka / fananganana / hoditra ary rano fitsaboana.
manana mpiasa mihoatra ny 50 izahay, manompo mpanjifa 600＋ any amin'ny firenena 90＋. Niitatra hatrany amin'ny kontinanta lehibe rehetra sy ny firenena lehibe ny tambajotranay.
Ny iraka ataonay dia ny hanomezana vokatra tsara kalitao hanatsarana ny hetsika simika manerantany
Momba ny teknolojia Tech kalsioma
Ny potasioma dia mahomby raha oharina
Ny masira misy potasioma, sira asidra am-borona dia mahomby kokoa noho ireo mi-acing asidra hafa toy ny: Potasioma acetate Urea Glycerol Raha ampitahaina amin'ny fangaro misy potasy, alaina amin'ny fahombiazan'ny havany 100%, ny asidra asidra dia manana ny fahombiazan'ny 80 ka hatramin'ny 85% ihany. arakaraka ny mari-pana mitombo.
Fitrandrahana menaka sy vita ny ranon-dra
Ny fampiatoana ny angovo sy ny fitaovana mazoto dia asa mafy sy mitaky. Ny rigny be dia be, tontolo iainana sarotra sy ny toe-piainana ara-tontolo iainana sarotra dia mahatonga azy io ho sarotra sy mampidi-doza. Ny fampitomboana ny tombom-barotra eo amin'ny sehatry ny solika sy ny entona dia manome fampisehoana tsara sy tombontsoa azo avy amin'ny tontolo iainana. Ny teknôlôma mamorona dia mamela ny fihenan'ny hafanana avo lenta, manamaivana ny fahasimbana amin'ny famoronana, mampihena ny fandidiana ary mampiadana ny tontolo iainana. Pulisi no mpitarika manerantany amin'ny famokarana sodium sy potasioma ary mifangaro tanteraka. Mitaky tahiry ampy izahay hamatsiana ny fangatahana tampoka ary omena ny fandefasana mahomby indrindra izy ireo eo amin'ny lafiny fitantanana sy fitaterana ara-batana. Ny zava-drehetra hitazonana ny fihosohana ririnina ary hisorohana ny fiatoan'ny famokarana lafo vidy.
Address: Faha-42, lalana Xincun, Tanànan'i Zibo, Sina